Waan bixin karnaa Turbocharger Rotor usheeda dhexeDhameystiran, oo ku habboon MAN B&W, WARTSILA-SULZER ， MITSUBISHI ， ABB ， IHI. Iyo shirkaddayadu waxay ilaalinaysay xiriir iskaashi dhow oo lala yeesho soosaarayaasha matoorrada waaweyn iyo warshadaha hoosaadyada adduunka oo dhan. Shirkaddu waxay caan ku tahay isha wax lagu iibsado ee lagu kalsoon yahay, tayo sare leh oo deggan iyo qiimo macquul ah. Intaa waxaa dheer, shirkadeennu waxay keydisaa tiro cayiman oo ah 'Turbocharger'Rotor usheeda dhexe Dhameystiran, si loo daboolo baahida macmiilka ee waqtigiisa.
Waxaan bixin karnaa Turbocharger Rotor usheeda dhexe Dhameystiran, sida soo socota:
Ku habboon taxanaha TPL ：
TPL69, TPL73, TPL77 iwm.
Hore: Wheel inducer iyo Blade
Usheeda dhexe Rotor
Turbocharger Rotor usheeda dhexe
Wareeg, Lowska, Wareega Giraanta,